दिपाश्रीसँग ‘पुरुषवार्ता’, भन्छिन्– ‘मिल्ने भए दिपकसँग बिहे गर्थें’ - Ramechhap Online
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दिपाश्रीसँग ‘पुरुषवार्ता’, भन्छिन्– ‘मिल्ने भए दिपकसँग बिहे गर्थें’
काठमाडौँ — हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा चर्चित दिपाश्री निरौलाको नाम अहिले चलचित्र उद्योगमा छाएको छ । विसं २०४२ देखि रंगमञ्चबाट रंगीन जीवनको सुरुवात गरेकी उनले पहिलो पटक पुरुषको भेषमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । ठुलो पर्दामा भने ‘नासो’ नामक चलचित्रबाट यात्रा थालेकी थिइन् । यद्यपी, टेलिफिल्म ‘तीतो सत्य’बाट उनले जति चर्चा कमाइन् त्यो भने अन्त कतैबाट पनि प्राप्त भएन ।उमेर ४० वसन्त पार गरिसकेपनि अविवाहित दिपाश्रीले कहिले बिहे गर्छिन् होला? उनीसँगै यो प्रश्नको जवाफ छैन। पहिले टेलिसिरियल, अहिले चलचित्रमा व्यस्त दिपाश्रीसँग यसपटक निकै भिन्न विषयमा कान्तिपुर अनलाइनका लागि रामजी ज्ञवालीले वार्ता गरे– ‘पुरुषवार्ता’।
तपाईंको आँखाले देखेको पहिलो पुरुष? बुबा। जीवनमा विशेष प्रभाव पारेको विशेष पुरुष? दिपकराज गिरी। अहिलेसम्म भेटेकोमध्ये सबैभन्दा सहयोगी पुरुष? जिवनमा सहयोगीपुरुष धेरै भेटिए। तर, दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे (माग्ने बुढो), जितु नेपाललगायतको नाम लिन सक्छु। एउटाको नाम भन्न गाह्रै पर्‍यो। सबैभन्दा धेरै माया लाग्ने पुरुष? बुबा। जहिले पनि घृणा लाग्ने पुरुष?
घृणै लाग्ने पुरुष त छैनन्। सकेसम्म मिल्न खोज्ने स्वभाव भएकाले होला त्यस्तो पात्र भेटिएको छैन। सबैभन्दा धेरै झर्को लाग्ने पुरुष? व्यस्त भएका बेला फेसबुक म्यासेन्जरमा कल गरिरहने सँग निकै इरिटेड लाग्छ। उहाँहरुले फ्यान हो भन्नुहुन्छ। अनि इग्नोर गर्ने भनेर थर्काउनुहुन्छ। सकेसम्म सम्झाएको छु। नसकिएकालाई ब्ल्क गर्दिएकी छु। यस्ता पात्र धेरै हुनुहुन्छ।
सबैभन्दा धेरैपटक सपनामा आएको पुरुष? केही वर्ष अघिसम्म राजेश हमाल सपनामा असाध्यै आउनुहुन्थ्यो। अहिले कहाँ जानुभएछ कुन्नी? तर, आजभोली दिपक नै बढी सपनामा आइरहेको हुन्छ। जहिले कल्पनामा आइरहने पुरुष? कल्पनामा आइरहने पुरुष छैन। त्यस्तो पुरुष भेटिएको खण्डमा सायद बिहे नै हुन्थ्यो होला। पहिलोपटक डेट गएको पुरुष?
नाम भन्न त मिल्दैन। उसको बिहे भैसक्यो। नाम भन्ने हो भने अहिले मिलेर बसिरहेको उनिहरुको दाम्पत्य जीवनमा असर पर्ला फेरी। प्रेममा धोका दिएको पहिलो पुरुष? मसँग पहिलोपटक डेटमा जानेले नै मलाई प्रेममा धोका दियो र अरुसँग बिहे गर्‍यो। पहिलोपटक लभ लेटर लेखेको पुरुष?उही नै। ४५ सालतिर होला सायद। त्यो लेटरको अहिले पनि धेरै सम्झना आउँछ।
पहिलोपटक बिहेको प्रस्ताव गर्ने पुरुष? उसैले मलाई बिहेको प्रस्ताव गरेको थियो। केहि कारणले बिहे गर्न मिलेन। अनि उसले आफ्नो बाटो मोड्यो। डेटमा जान मन लागेको पुरुष? अलिकति अघिसम्म अमिताभ बच्चनसँग डेटमा जान असाध्यै मन लाग्थ्यो। आजभोली शाहरुखको भुत चढिरहेको छ। आइएफा अवार्ड भयो भने भेट भइहाल्छ कि भन्ने लाग्याथ्यो। त्यो पनि नहुने भइहाल्यो। बिहे गर्न मन लागेको पुरुष? दिपकराज गिरी। तर, के गर्नु उहाँको बिहे भैसकेकोको छ। मिल्दैन।
संसारमै सबैभन्दा हेण्डसम लागेको पुरुष? सलमान खान। हेरेका चलचित्रमा सबैभन्दा मनपर्ने पुरुष क्यारेक्टर? मिथुन चक्रवर्ती। सबैभन्दा मनपर्ने पुरुष निर्देशक? निश्चल बस्नेत। तपाईंले पढेका पुस्तक भित्र सबैभन्दा मन परेको पुरुष पात्र? वीपी कोइराला। निरन्तर जति बेला पनि संवाद हुने पुरुष? दिपकराज गिरी। सबैभन्दा मनपर्ने पुरुष नेता? केपी र प्रचण्ड। उनिहरु दुवै मलाई असाध्यै मनपर्ने नेता हो। ड्रेससेन्स भएको ह्याण्डसम पुरुष?
भुवन केसी। सेन्स अफ ह्युमर भएको पुरुष? निर शाह। केटाकेटीमा सबैभन्दा धेरै खेलेको पुरुष? विशाल थापा र राकेश निरौलाको नाम अहिले पनि सम्झनामा छ। जीवनमा पहिलोपटक तपाईंको झापड खाने पुरुष? मेरो भाइ गोपाल निरौला।
भर्खरै घट्यो चमत्कारिक घटना, आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्नै लाग्दा महिला एक्कासी यसरी ब्युँतिएपछि
फोटो बिवादमा साम्राज्ञीको यस्तो आयो प्रतिक्रिया
सरकारको नयाँ नियम अब मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्न नपाईने